सरकारले नै हामीलाई अपहेलित गर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले षड्यन्त्र गर्यो : डा. भट्टराई - newslinesnepal
सरकारले नै हामीलाई अपहेलित गर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले षड्यन्त्र गर्यो : डा. भट्टराई
प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:१३
काठमाडौं, २९ चैत ।आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल, सघर्ष समितिका उप–संयोजक डा. सुशिलमोहन भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफुहरुमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रालयले आफुहरुको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।
उनले आफूहरुलाई समायोजनको नाममा एउटै तहमा थन्काएर जेलमा हाल्न नपाईने तर्क गरे । उनले भने,‘हामीलाई वैज्ञानिक तवरले समायोजनमा हाल्नुपर्छ । फोकल गरेर पठाउनुपर्छ ।’ आफूहरु संघीयताविरोधी नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो राजनीतिक मुद्दा होईन, र हामी राजनीति पनि बुझ्दैनौं । हामी संघीयताको पक्षपोषण पनि गर्दैनौं र विरोध पनि गर्दैनौं ।’